Safidio Fividianana Switch - China Safidio mpanamboatra sy mpamatsy
SC-501 mifantina kofehy solenoid
Topimaso ny antsipirihany momba ny toerana niaviany: Zhejiang, China anarana anarana: SC Modely laharana: SC-501 Haavo fiarovana: A Max. Ankehitriny: 8A Max. Volonta: 230V Famaritana vokatra HVACSpecifications1.Harena kalitao sy misy vidiny azo antoka2.Lava maharitra, lon ...
Ny ampahany amin'ny herin'ny herinaratra SC-406 herinaratra tsy mandeha
Topimaso ny antsipirihany momba ny toerana niaviany: Zhejiang, China anarana anarana: SC Modely laharana: SC-406 Haavo fiarovana: A Max. Ankehitriny: 8A Max. Volonta: 230V Famaritana vokatra HVACSpecifications1.Harena kalitao sy misy vidiny azo antoka2.Lava maharitra, lon ...
Ny herin'ny herinaratra herinaratra SC-503
Topimaso ny antsipirihany momba ny toerana niaviany: Zhejiang, China anarana anarana: SC Modely laharana: SC-503 ambaratonga fiarovana: A Max. Ankehitriny: 8A Max. Volonta: 230V Famaritana vokatra HVACSpecifications1.Harena kalitao sy misy vidiny azo antoka2.Lava maharitra, lon ...